vendredi, 15 juin 2018 08:57
Mpampianatra sy Mpanabe ary Mpandraharaha: Hisy Oniversité manokana hanofanana azy ireo, atsangana ny Village scolaire et Universitaire
Apetraka amin'ny toerana maha izy azy ny Mpampianatra sy Mpanabe, satria fototry ny fanabeazana sy ny fahaizana. Hisy sekoly ambony ao anatin'ilay Oniversité isaky ny Faritra 3 atsangana, Avaratra, Afovoany, Atsimo, hanofanana ireo Mpampianatra sy Mpanabe. Hisy ireo fampihofanana mitohy, formation continue, mba hifanentana amin'ny toetr'andro ny fahaizana ampitaina. Hikarama toy ny mpiasam-panjakana avokoa ny Mpampianatra rehetra, na miankina na tsy miankina amin'ny Fanjakana. Tsy misy intsony izany ny FRAM na ramose daba, hiantohan'ny Ray amandrenin'ny mpianatra izany, adidin'ny Fanjakana ny fanabeazana sy ny fampianarana ny zaza sy ny tanora.
mercredi, 13 juin 2018 15:00
Faritra 3: Hajaina ny fomba amam-panao, fitsinjarana andraikitra mazava no apetraka
Ny fomba amam-panao, tsy foanana satria izay fahasamihafana izay dia harena ho antsika, fa famaritana andraikitra administratif ihany ny fitsinjarana ho Faritra 3, Avaratra, Afovoany, Atsimo. Mandany vola sy manavesatra andraikitra fotsiny ny Distrika, Région, Province. Avy dia omena ny Fokontany ny andraikitra feno ampandrosoana ny faritra misy azy. Ny tetibola na budget, avy dia atao mivantana any, amin'ny alalan'ilay carte életronique, vao misy mividy entana dia avy hatrany dia mandeha mivantana amin'ny compte:
mardi, 12 juin 2018 14:10
Fitsinjarana andraikitra: Atao Faritra 3, Avaratra, Afovoany, Atsimo
Betsaka ny resaka na lalàna efa natao amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy, fa dia samy namikitra nitazona ny fahefana ho an'ny vondrona antokon'olom-bitsy hatrany. Novesarana rafitra poakaty tsy misy fahefana, tsy misy vola. Ialana ny rafitra fanjanahantany ka dia ho tsinjaraina Faritra 3, Avaratra, Afovoany, Atsimo i Madagasikara. Tsy misy ny misaratsaraka, samy mahazo ranomasina andrefana, atsinanana. Atao eo anivon'ny Fokontany ny fampandrosoana rehetra, ka dia omena azy ny andraikitra rehetra sy ny tetibola. Rehefa ampiasaina ilay Karatra mavo ho an'ny mpanjifa ary Karatra maitso ho an'ny mpivarotra sy mpandraharaha (Carte électronique) dia azo eo noho eo ny hetra, voafehy ny kolikoly, hihena ny tsy fandriam-pahalemana, ka hiakatra avo 5 heny avy hatrany ilay tetibolam-panjakana 5 000 miliara Ariary ankehitriny, ho lasa 25 000 miliara Ariary izany ka ny:
lundi, 11 juin 2018 16:24
Tetikasa Vitatsikaio: Fototry ny fanabeazana ny tanora ny fanatajahan-tena, ho fitaratry ny Firenena eo imason'izao tontolo izao
50% n'ny mponina eto Madagasikara dia latsaky ny 18 taona avokoa. 75% dia latsaky ny 50 taona. Tanora tokoa izany ny mponina eto Madagasikara. Ka rariny raha ahompana betsaka amin'ny tanora ny fampandrosoana ny Firenena. Efa noresahina teto ny fampianarana, ny fahasalamana, ny asa izay omena ny tanora rehetra.Tsy maintsy mianatra ny zaza rehetra manomboka ny 3-16 taona, ary miasa daholo kosa ny 16-50 taona.Hiantohana avokoa ny fianarana, ny bourse, ny trano honenana, ny fahasalamana, ny asa, cantine scolaire, transport scolaire.
samedi, 09 juin 2018 13:39
Tetikasa Vitatsika io: Soloina Carte électronique ny vola sy ny fifanakalozana
Ny vola dia fitaovana iray hifanakalozana ara-barotra, misy entana na Service amidy na ambongadiny na antsinjarany, dia rehefa mifanaiky amin'ny zavatra vidiana sy ny vidiny ny roa tonta, dia atao ny fifanakalozana. Mety atao hifanatrehana izany, mety atao alavitra. Ilaina foana izany ny fifampitokisana eo amin'ny mpividy sy ny mpivarotra. Misy kosa ny garantie apetraky ny lalàna raha efa samy lasa, nefa nisy tsininy ilay entana novidiana na nisy tsy voaloa araka ny tokony nifanarahana ny vola, nefa ny entana na ny service efa livré. Ao anatin'izay anefa, ny fanjakana dia maka hetra izay tataovana ilay fifanakalozana, entina anaovana fotodrafitrasa ampiasain'ny mpividy sy mpivarotra sy ny mpanjifa ary ny vahoaka rehetra.
vendredi, 08 juin 2018 09:29
Tetikasa Vitatsika io: Fanoitra ho an'ny fampandrosoana ny Faritra ny Harena ankibon'ny tany
Maro tsy lanin'ny Malagasy rehetra raha ny Harena ankibon'ny tany eto amintsika. 1- Fitrandrahana vaventy: Ny Malagasy no mitrandraka ny Harena Ho raisain'ny Fitondrana foibe avokoa ny fitrandrahana goavana eto Madagasikara, atsangana ny Orin'asa mpitrandraka sy ny indostria hanodina izany ho akora azo ampiasaina, tsy misy vokatra ahondrana ambongadiny. Fitsinjarana ny petrabola (Capital) - Foibe: 50%- Faritra (3): 10%- Malagasy rehetra na orin'asa Malagasy na orinasa vahiny mipetraka eto Madagasikara: 10%- Vahiny: 30% 2- Fitrandrahana madinika sy salantsalany: Izay tompon'ny tany no tompon'ny harena ambanin'ny tany
50 000 étudiants universitaires 500 000 élèves professionnels publics ou privés Bac+3 miakatra: 250 000 ariary/isam-bolanaBac - Bac+3: 125 000 ariary/isam-bolanaBEPC- Bac (Ecole Professionnelle publique ou privée): 50 000 ariary/isam-bolana * Bac+3 miakatra: 15 000 x 250 000 ariary/isam-bolana = 3,750 miliara ar x 9 mois = 33,750 miliara ar/an = 11,250 millions de dollars/an* Bac - Bac+3: 35 000 x 125 000 ariary/isam-bolana = 4,375 miliara ar x 9 mois = 39,375 miliara ar/an = 13,125 millions de dollars* BEPC- Bac (Ecole Professionnelle): 500 000 x 50 000 ariary/isam-bolana = 25 miliara ar x 9 mois = 225 miliara ariary = 75 millions de dollars
lundi, 04 juin 2018 23:11
Emission spéciale Patrick Raharimanana sur TvPlus le 04 juin 2018
Emission spéciale Patrick Raharimanana sur TvPlus le 04 juin 2018. Vitatsika io.Patrick https://www.youtube.com/watch?v=A2cpHWuU4Pc
samedi, 02 juin 2018 09:23
Service National: Omena fiofanana sy asa ny rehetra
Tsy asa an-terivozina akory, fa isika manana olona 4 millions eo tsy an'asa na miasa fa tsy mahavelon-tena ny karamany. Ka ampiasaina amin'ny toerana sy andraikitra sahaza azy avokoa ireo olona ireo. Ny informaticien omena andraikitra amin'ny informatisation de l’administration, ny dokotera alefa any amin'ny hopitaly ambanivohitra rehetra, ny mpampianatra mampianatra, ny mpanao barazy manao barazy fambolena, ny mpanao lalana manao lalana. Tsy ilay mpamaky vato misy rojo vy eritreretin'ny sasany akory, amin'izao misy engin, machine mahavita izany. Tsy manakana izay asa tanana ihany koa anefa izany. Betsaka ny asa ampanaovina azy ireo:
jeudi, 31 mai 2018 10:45
Service National: Tsy maintsy miasa ny rehetra
Tsy maintsy mandeha mianatra avokoa ny tanora latsaky ny 16 taona. Miditra Service National avokoa izay tsy mianatra nefa tsy manana asa rehetra manomboka ny 17-50 taona, na vavy na lahy, obligatoire io. Ireo mihoatra ny 50 taona, ireo mpitaiza, ireo reny na ray mikarakara tokantrano, mpanabe, mpitondra fivavahana, mpikarakara fikambanana sosialy, sport, zava-kanto, ireo manana kilema, dia manokana andro iasany arakarak'izay vitany. Ireo tsy salama na tsy afaka fizaham-pahasalamana na visite médicale dia tsy manao SN. Betsaka ny asa ampanaovina azy ireo: